Maxaad Ka Xusuusataa Dhacdooyinkii Wanaagsanaa Ee 2019-ka? | WAJAALE NEWS
Maxaad Ka Xusuusataa Dhacdooyinkii Wanaagsanaa Ee 2019-ka?
December 25, 2019 - Written by Editor:
Waxaa laga yaabaa iney jireen dhacdooyin u muuqday in dad badan ay jeclaan karaan sababtoo ah dhammaan dhacdooyinka 2019-ka ma wada ahayn kuwa dhibaato un ka hadla. Dhacdooyinkii wanaagsanaa ee 2019-ka waxaa ka mid ahaa:
Diin la aaminsan yahay inuu 100 sano jir yahay oo la arkay
Diin weyn oo la aaminsan yahay in la tirtiray 100 sano ka hor ayaa lagu arkay Jasiiradda Galápagos ee badda Pacific taas 1000km u jirta xeebta dalka Ecuador. Diin noociisa ah oo la arko waxaa ugu dambeysay sannadkii 1906. Waxaa la aaminsan yahay in diinkani uu 100 sano jir yahay, waxaa kaloo suurgal ah inuusan kaligii ahayn oo ay jiraan kuwa kale oo isaga la qarni ah sababtoo dadka ilaaliya xayawaanaadka waxay sheegayaan in qolfaha iyo saxarada diinka oo aaggaasi lagu arkay awgood ay suuro gal tahay iney jiraan qaar kale oo halkaasi ku nool. Waxaa kaloo war wanaagsan ah in tirada diin badeeedka ay sare u kacday tan iyo markii la bilaabay ilaalinta diin badeedka sannadkii 1973-dii.
Tirada libaax badeedka oo korodhay
Tirada Libaax badeedka ayaa waxay sare u kacday boqolkiiba sagaashan iyo saddex (93%) sannadkan 2019-ka. Qarniyo oo la waday ilaalinta libaax badeedka, ayaa waxaa haatan la dareemay inuu sare u kac ku yimi libaax badeedka badda Atlantic.
Rajo cusub oo dawo loogu helo karo dadka qaba cudurka macaanka ee nooca 1-aad
Seynisyahanada dalka Mareykanka ayay u suuro gashay in xubno ka tirsan jirka bini’aadamka ay u beddelaan kuwa soo soo saara maaddada islulin waxayna taasi keenaysaa rajo cusub oo daawo loogu helo karo dadka qaba cudurka macaanka ee nooca 1.
Daweynta HIV Virus-ka waxay difaaceeysaa isu gudbinta HIV virus ee galmada, sida lagu ogaaday cilmi baaris lagu daabacay joornaal uu leeyahay sheybaarka Lancet. Cilmi baaristan ayaa la xaqiijiyay ka dib markii 1000 qof oo qaarkood qaba cudurka lagu tijaabiyay, kuwaasi oo isu galmooday, markii la baaray ka dibna ma aysan jirin isu gudbin dhanka HIV virus.
Cudurka Malariyada oo laga cidhib tiray dalal badan
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Caafimaadka ee WHO ayaa sheegeysa in Malaariyada laga cidhib tiray dalalka Al-Jeeriya iyo Argentina. Sida ay sheegtay hay’adda WHO, cudurkan oo ay sababo qaniinyada kaneecada haatan la cirib tiray 38 waddan oo ku kala yaalla dunida daafeheeda.
Meereheena oo cagaar sii noqonaya
Sida ay sheegtay Nasa dhulka ayaa haatan waxa uu ka cagaaran yahay marka loo bar-bar dhigo 20 sannnadood ka hor taasi oo sabab u ah beerashada dhulka iyo mashruucyada dib u dhireynta ee Afrika, Hindiya iyo Shiinaha. Nasa ayaa sidoo kale sheegeysa in meeraha dhulka ay caleenta geedaha sare u kacday ilaa 2 milyan oo isku wareeg ah.